कतार प्रहरीमा भर्ना हुन चाहने नेपालीका लागि खुशीको खबर, कती हुन्छ तलब ? – Sapana Sanjal
June 29, 2021 379
Sapana Sanjal : काठमाडौं । तपाई प्रहरीमा भर्ती हुन चाहीरहनुभएको छ र अवसर पाइरहनुभएको छैन भने तपाईका लागि खुशीको खबर छ । त्यो पनि कतार प्रहरीमा ।
Prevहोसियार ! नेपालमा काे-राेनाकाे नक्कली खाेप बिक्री वितरण गरेकाे पाइन थाल्यो